ओखलढुङ्गामा स्थानिय तहको चुनावी सरगर्मी : यी हुन् टिकट पाउन सक्ने अनुहार ! | Diyopost - ओझेलको खबर ओखलढुङ्गामा स्थानिय तहको चुनावी सरगर्मी : यी हुन् टिकट पाउन सक्ने अनुहार ! | Diyopost - ओझेलको खबर
ओखलढुङ्गामा स्थानिय तहको चुनावी सरगर्मी : यी हुन् टिकट पाउन सक्ने अनुहार !
दियो पोस्ट बुधबार, चैत्र ०९, २०७८ | २०:३८:२३
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गते स्थानिय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ । आगामी वैशाख ११ र १२ गते उम्मेदवारहरुले मनोनयन दर्ता गर्नुुपर्ने समेत छ ।
स्थानिय तहको निर्वाचनका माहोलले अन्य जिल्ला जस्तै ओखलढुंगा पनि तातेको छ । ओखलढुङगामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बर्चस्व छ । यी चारै दल आगामी चुनावी रणनीतिमा लागि सके । यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर वा एक्लाएक्लै भिडन्त हुने निश्चित छ । तत्कालिन नेकपा एमालेको सरकारले गरेको अधिनायकवादी हर्कतको विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले आफूलाई उभ्याएको छ । हाल बनेको सत्ता गठबन्धन पनि यही एमालेको प्रतिरोधी समुह हो । त्यसो त ओखलढुंगा कांग्रेसमाथि विकास विरोधीको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले सुनकोशी गाउँपालिका अध्यक्षमा कमल तामाङलाई उठाउने तयारी गरेको छ । उनी बाहेकको उम्मेदवारले चुनाव जित्न गाह्रो हुने आंकलन छ । त्यस्तै सुनकोशीमा महाधिवेशन प्रतिनिधी कुमार श्रेष्ठ, जिल्ला सहसचिव भोजकुमार श्रेष्ठ, र नेता भिम गौतमको नाम पनि चर्चाको शिखरमा छ । यद्धपी हालका पालिका अध्यक्ष रुद्र अधिकारीले पनि दाबी छाडेका छैनन् । अधिकारीलाई अहिले सम्म प्रवल दावेदार भन्न सकिने आधारहरु जिवित छन । तर, सुनकोशी गाउँपालिकामा अन्तिम रस्साकस्सी रुद्र, कमल र कुमर र भोजकुमार श्रेष्ठको हुने स्थानिय कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बताउँछन् । यता सोम तामाङले समेत पालिका अध्यक्षको दाबेदारी छाडेका छैनन् । चुनाव जित्नका लागि बुद्ध लामाको भूमिका समेत निर्णायक हुने कारण उनको सहानुभूतिको अपेक्षा गरेका छन् । उपप्रमुखमा सुनिता अधिकारी, सरस्वति कटवाल, लालकुमारी धमला पहाडी, शान्ता मगर मध्येबाट छानिने बताइएको छ ।
एमालेमा देवेन्द्रवावु राई, सरस्वती कार्की, जालान्धर कार्की, इन्द्रवहादुर खड्का, टंकलाल गिरी र हितराज कार्की आकांक्षी छन् । उपप्रमुखमा तारा कार्कीको नाम सुनिश्चित भएको बताइने गरेको छ । तारा कार्की जिल्ला नेताहरु अमिर गरुङ र बालकृष्ण ढुङगेलकी विश्वास पात्र समेत हुन् । पछिल्ला दिनसम्म आउँदा देवेन्द्रवावु र इन्द्रवहादुर,टंकलालको नाम चर्चामा छ । माओवादीले चम्पा कार्की वा हेमसागर पराजुलीको नाममा छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।
यता चम्पादेवी गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसले हालका पालिका प्रमुख तथा पार्टी उपसभापती तथा युवा नेता नवराज केसीलाई नै दोहोर्याउने आंकलन गरिएको छ । एमालेसँग प्रतिष्पर्धाका लागि पनि उनको उम्मेवारी निश्चित जस्तै भएको चर्चा छ । केसी कार्यकर्ता मैत्री, विकासप्रेमि नेताको रुपमा चिनिन्छ । यधपी जिल्ला पार्टी सचिव अजय लुईटेल र सहसचिव उज्वन वुढाथोकी समेत निर्णायक हुने भएकाले नेता त्रयको आपसी सहमतिमा टिकटको अन्तिम छिनोफानो हुने छ । वुढाथोकी युवामाझ सार्वाधिक लोकप्रिय नेता समेत हुन ।
उपप्रमुखमा निर्मलादेवी रैकाको नाममा सहमति हुने सम्भावना छ । एमालेबाट भवानी घिमिरे, हरि घिमिरे र सुरेश थापामध्ये कसलाई अगाडी सार्नेे भन्ने छलफल जारी छ । सुरेश, भवानी वा हरिमध्ये मिलेर एकजना ल्याउने तयारी छ । पालिकाको निर्णायक मत रहेको पलापुबाट एमालेले टिकट दिने सम्भावना रहेकाले पलापुवासी घिमिरेद्धय मध्ये एकले टिकट पाउने एमाले स्रोतको दाबी छ ।
लिखु गाउँपालिकामा कांग्रेसले शान्तिराज खडका, राजन सुवेदी, कुमार सुवेदी र अशोक कार्कीलाई प्रमुखमा अगाडी सार्ने तयारी गरेको छ । राजनितिक नियुतिm खाएका अशोक बाहेक राजन र शान्तिराजको सम्भावना प्रबल रहेको बताइन्छ । एमालेबाट शान्ता ढुङगेलको चर्चा चलिरहेको छ । माओवादीबाट अनिल योगी मैदानमा आउने आँकलन छ । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकामा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले टिकट नपाए चुनाव जित्न नसकिने भविष्यवाणी भइरहेको छ । एमाले र माओवादीको समेत सहानुभुति पाएका रुम्दालीको पक्षमा निर्णय नहुँदा जिल्लामा काँग्रेस छ छैन भन्ने समेत आँकलन हुने कार्यकर्ताको आशंका छ । उपाध्यक्षमा सविता राईलाई ल्याउने पक्का भएको एक नेता बताउँछन् । जिल्ला सभापति तेजेन्द्र खनाल तथा केन्द्रिय सदस्य प्रदिप सुनुवार, रामहरी खतिवडाको मनसाय रुम्दालीलाई अगाडी सारेर सविता राईलाई उपाध्यक्ष उठाउने तयारी छ । एमालेबाट शम्भु अधिकारीले टिकट पाउने दाबी छ । माओवादीबाट अर्जुन गौतमलाई टिकट दिने निकटस्थहरुको दाबी छ र ।
चिशंखुगढी गाउँपालिकामा काँग्रेसले यदि चुनाव जित्ने हो भने नविन राईलाई मैदानमा उतार्नु पर्ने आवाज कार्यकर्ताको छ । विवाद रहित राई जिल्लादेखि केन्द्रसम्मका कुनै पनि विवादमा नपर्ने नेता हुन् । टिकटको आकाक्षा राजकुमार ढुङगाना, सन्ताषबाबु वस्नेतले समेत राखेर लविङ गरिरहेको कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ । ढुङगाना पार्टी जिल्ला सचिव समेत रहेकाले उनको समेत सम्भावना वढेर गएको स्रोतको दावी छ । माओवादीबाट निशान्त शर्माको सम्भावना स्वभाविक रहने छ । माओवादीले जिल्लामा यस अघि साख जोगाएको पालिका र पात्र समेत शर्मा भएकाले टिकट पाउने र जित्ने समेत उनै हुन् भन्ने कार्यकर्ताको भनाई छ ।
सिद्धिचरण नगरपालिकामा कांग्रेस जिल्ला सभापति तेजेन्द्र खनाल आफै मेयरमा उठ्ने तयारीमा छन् । कार्यकर्ताले सभापति आफै मैदानमा आय चुनाव जितिने भन्दै समर्थन गरेका कारण सभापतिको सम्भावना रहेको स्रोतको दाबी छ । नेता शर्वधन तमाङलाई सभापतिको वैकल्पिक उम्मेदवारको रुपमा हेरिएको छ । उपमेयरमा मैया राइलाई ल्याउने तयारी छ । नेकपा एमालेबाट हालकी उपमेयर इच्छा गुरुङलाई अगाडी सार्ने योजना छ । जो नगरबासीको रोजाइकी उम्मेदवार समेत हुन् । इच्छाको विकल्प सोच्न नहुने पक्षमा रहेका प्रदेश सांसद अम्बिर गरुङ, प्रतिनिधि सभा सदस्य यज्ञराज सुनुवारले इच्छाको नाममा मौन सहमति जनाएको दाबी छ । मोहन केसीको उपमेयरमा लगभग निश्चित रहेको स्रोतको दावी छ । नेकपा समाजवादीले जिल्ला पार्टी अध्यक्ष हंशराज वाग्लेलाई अगाडी सार्दै प्रचार प्रसार गरिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यावसायी संघको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वाग्लेको बढ्दो प्रभावका कारण अन्य दल समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । खिजिदेम्वा गाउँपालिकामा कांग्रेसले वेदबहादुर रोक्काको विकल्प नखोज्ने भएको छ । रोक्काको सम्भावना शतप्रतिसत रहेको बताइन्छ । राम सुनुवार, अनुप सुनुवार, भुपेन्द्र वस्नेतले समेत चाहना राखेका छन् । उपप्रमुखमा सुशिला फेरी दाहोरिने आँकलन छ । एमालेले राम बहादुर खत्रीलाई अगाडी सार्ने बताउँदै आएका छ । मोलुङ गाउपालिकामा काँग्रेसबाट गंगावहादुर कार्की र प्रकाश दाहालको सम्भावना रहेको छ । कार्की कांग्रेसको प्रदेश सदश्य तथा जिल्लामा परिचित नाम हो भने दाहाल बौद्धिक तथा चतुर नेता हुन् । कार्की विवाद रहित पात्र समेत हुन । उपमा संगिता तमाङ वा उनले इच्छाएको व्यक्ति हुने सम्भावना छ । एमालेबाट मणिराज राईको सम्भावना रहने प्राय निश्चित रहेको एमाले स्रोतको दाबी छ ।
बुधबार, चैत्र ०९, २०७८ | २०:३८:२३